Yosef—Akoa Bi a Ɔyɛɛ Nea Onyankopɔn Pɛ | Nea Mmofra Betumi Asua Afi Bible Mu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Bicol Bislama Boulou British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Kabiye Kabuverdianu Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Nzema Okpe Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tiv Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Akoa Bi a Ɔyɛɛ Nea Onyankopɔn Pɛ
Ná Yosef ka Yakob mma nkumaa no ho. Ne nuanom mpanyimfo no huu sɛ wɔn papa pɛ Yosef asɛm paa. Wohwɛ a, na ɛbɛyɛ ne nuanom mpanyimfo no dɛ? Ná wɔn ani bere Yosef, enti na wɔtan no. Yosef soo dae ahorow bi a na ɔnte ase, enti ɔka kyerɛɛ ne nuanom. Yosef nuanom tee dae no ase sɛ, da koro wɔn nyinaa bɛkotow no. Wei maa wɔtan no kɛse!
Da bi, na Yosef nuanom rehwɛ nguan wɔ kurow bi a ɛbɛn Sekem. Enti Yakob somaa Yosef sɛ ɔnkɔsra wɔn na ɔnhwɛ sɛnea wɔn ho te. Bere a wohuu Yosef wɔ akyirikyiri no, wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ, ‘Akoa a ɔsoso dae no na ɔreba no. Momma yenkum no!’ Enti wosoo Yosef mu denneennen, na wɔtow no twenee amena tenten bi mu. Nanso ne nua baako a yɛfrɛ no Yuda kaa sɛ: ‘Ɛnsɛ sɛ mukum no! Mmom, yɛntɔn no na ɔnkɔyɛ akoa.’ Ná Midianfo bi a wɔtɔn nneɛma rekɔ Egypt, enti wɔtɔn Yosef maa wɔn. Midianfo no tuaa sika nnwetɛbona 20 maa ne nuanom no.
Afei Yosef nuanom de n’atade hyɛɛ apɔnkye mogya mu. Wɔde atade no kɔmaa wɔn papa na wobisaa no sɛ: ‘Ɛnyɛ wo ba no atade ni?’ Wei maa Yakob adwene yɛɛ no sɛ aboa kɛse bi akum Yosef. Yakob werɛ howee paa. Obiara antumi ankyekye ne werɛ.
Wɔtɔn Yosef ma ɔkɔyɛɛ akoa wɔ Egypt. Ɔpanyin bi a yɛfrɛ no Potifar na ɔtɔɔ no. Nanso na Yehowa ka Yosef ho. Potifar huu sɛ Yosef pɛ adwuma paa, na ɔka nokware nso. Enti ankyɛ koraa na Potifar de biribiara a ɔwɔ hyɛɛ Yosef nsa.
Potifar yere huu sɛ Yosef ho yɛ fɛ na ɔwɔ ahoɔden nso. Da biara, na maame no ka kyerɛ Yosef sɛ ɔne no nna. Wohwɛ a, Yosef bɛyɛ dɛn? Wampene. Mmom ɔka kyerɛɛ maame no sɛ: ‘Dabi! Ɛyɛ bɔne. Me wura gye me di, na woyɛ ne yere. Sɛ me ne wo da a, na mayɛ bɔne atia Onyankopɔn!’
Da bi deɛ, Potifar yere no yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛhyɛ Yosef ama ɔne no ada. Enti osoo Yosef atade mu denneennen sɛ ɔne no nna, nanso Yosef guanee. Bere a Potifar baa fie no, ne yere ka kyerɛɛ no sɛ Yosef baa ne nkyɛn sɛ ɔne no bɛda. Nanso na maame no retwa atoro. Potifar bo fuwii paa, na ɔde Yosef kɔtoo afiase. Ne nyinaa mu, Yehowa werɛ amfi Yosef.
“Enti mommrɛ mo ho ase nhyɛ Onyankopɔn nsa a tumi wom no ase na wama mo so bere a ɛsɛ mu.”—1 Petro 5:6
Nsɛmmisa: Dɛn na Yosef nuanom yɛɛ no? Adɛn nti na wɔde Yosef kɔtoo afiase?
Genesis 37:1-36; 39:1-23; Asomafo Nnwuma 7:9
Yosef Ho Bible Krataa
Hwɛ nea enti a Farao de Yosef yɛɛ n’abadiakyiri wɔ Egypt.